ပြည်နယ် 50 မှတစ်ခုချင်းစီအတွက် creepiest မြို့ပြဒဏ္endာရီအပိုင်း 10
ပင်မစာမျက်နှာ	ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း	ပြည်နယ် 50 မှတစ်ခုချင်းစီအတွက် creepiest မြို့ပြဒဏ္endာရီအပိုင်း 10
by Waylon ဂျော်ဒန် ဇန်နဝါရီလ 18, 2021
by Waylon ဂျော်ဒန် ဇန်နဝါရီလ 18, 2021 4,149 အမြင်များ
US ကိုဖြတ်ပြီးငါတို့မြို့ပြဒဏ္journeyာရီခရီးကိုအဆုံးရောက်ပြီလား?! ငါတို့ရှိသည်ထင်သည် ၎င်းကိုယုံရန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသွားလာရေးခရီးစဉ်၏နောက်ဆုံးပြည်နယ် ၅ ခုနှင့်အတူရှိနေပြီး၎င်းတို့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ရေးထားသမျှအတိုင်းစာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြောင်းသင်မျှော်လင့်ပါသည်။
ယခုခရီးစဉ်၏နောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်သောကြောင့်မျှော်လင့်ချက်မပျောက်ပါစေနှင့်။ ဒီနောက်ဆုံးငါးချက်ကပထမနည်းနည်းလောက်ကောင်းတယ်၊ ငါတို့ကပြည်နယ်ထဲကနေနေရင်မင်းဘယ်သွားမလို့ဘယ်တော့မှမသိဘူး။
ဗာဂျီးနီးယား: အဆိုပါ Bunnyman
ကနေတဆင့်ဓာတ်ပုံ Flickr ကို
ဗာဂျီးနီးယားကိုရောက်ဖို့အချိန်အကြာကြီးစောင့်ခဲ့ရပြီး Bunnyman အကြောင်းပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းကိုငါ့ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားတယ်။ ၎င်းသည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုမှမွေးဖွားခဲ့သောစစ်မှန်သောမြို့ပြဒဏ္isာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ နှင့်မှုတ်သွင်းထားသောဇာတ်လမ်းပြောပြသူများ၊
၁၉၇၀၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင်လေတပ်အကယ်ဒမီမှ Robert Bennett နှင့်သူ၏စေ့စပ်ထားသူသည်အဖြူရောင်ယုန်ဝတ်စုံဖြင့်ဝတ်ဆင်ထားသောလူတစ် ဦး သည်သစ်ပင်များမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသောအခါရပ်နားထားသောကားတစ်စီးတွင်ထိုင်နေသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ငါမင်းရဲ့ tag နံပါတ်ရှိတယ်! "
ထိုသူသည်ပြတင်းပေါက်ကိုဖောက်။ ကားပေါ်မှဆင်းသွားပြီး Bennett ကကားမောင်းရန်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။ တောထဲပြန်မသွားခင်သူတို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့လူကသူတို့အော်ဟစ်လိုက်တယ်။
ဆယ်ရက်အကြာတွင်အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုံခြုံရေးအစောင့်တစ်ယောက်ဖြစ်သော Paul Phillips သည်လူကိုမီးခိုးရောင်၊ အနက်နှင့်အဖြူရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသူတစ် ဦး အားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Phillips သည်ထိုတိုက်ခိုက်သူအားပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြင်ဖြင့်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးသူ့အားအသက် ၂၀ အရွယ်၊ ၅'၈″ နှင့်အနည်းငယ်ထွားနေသူဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုလူသည်ပုဆိန်ဖြင့်ဆွဲ။ ၊ မင်းအနီးကပ်လာရင်မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပစ်မယ်။ ”
နောက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မြို့ပြဒဏ္goldာရီရွှေ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Bunnyman ရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုနဲ့သူ့ဇစ်မြစ်အကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေအကြောင်းပုံပြင်တွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုသည် ၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသူလူနှစ် ဦး သည်ထိုဒေသရှိတောအုပ်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။ မကြာမီဒေသခံများသည်အသားအရေခြောက်သွေ့သောယုန်အသေကောင်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုသည် ဦး ထုပ်တွင်ရေနံစိမ်း၊ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပုဆိန်ပါသည့် Fairfax ဘူတာမှချိတ်ဆွဲထားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊ ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်များပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်ဟုအာဏာပိုင်များကယူဆခဲ့သည်။ သို့သော်ယုန်အသေကောင်များများပိုမိုတွေ့ရှိသဖြင့်အခြားထွက်ပြေးလာသူမှာလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမကြာမီတွင်ရှင်းလင်းစွာသိလာရသည်။
ယခုအခါသူတို့က Bunnyman သည်ထိုဒေသကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေဆဲဖြစ်ပြီးဒေသခံများအားအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ဟယ်လိုဝိန်းချဉ်းကပ်သကဲ့သို့တံတားပေါ်မှသူ၏သားကောင်များကိုချိတ်ဆွဲထားဆဲဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီသက်သေအထောက်အထားကိုတစ်ခါမှမတွေ့ရသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မိဘတွေကသူတို့ကလေးတွေကိုဟယ်လိုဝိန်းပွဲမှာသတိထားဖို့သတိပေးတာကိုမတားဆီးနိုင်တာကြောင့်သူတို့ဟာ Bunnyman ရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ဤသည်ဒဏ္theာရီလူကြမ်းတစ်ဝိုက်ပေါ်ထွက်လာသောပုံပြင်များတစ်ပုဒ်တည်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များတည်ဆောက်ခြင်းကိုစိတ်ပျက်နေပုံရသည့်လူတစ် ဦး မှ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းဖြစ်ပျက်မှုနှစ်ခုမှထွက်ပေါ်လာခဲ့ပုံရသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည် areaရိယာ၌။
သငျသညျ Bunnyman အကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်, Jenny Cutler Lopez ၏ဆောင်းပါး“ Long Live the Bunnyman” မှဆောင်းပါး 2015 ကနေမြောက်ဗာဂျီးနီးယားမဂ္ဂဇင်း။ ၎င်းသည်ကန ဦး အဖြစ်အပျက်များကိုဖုံးကွယ်ထားသော်လည်း Bunnyman ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကြီးထွားလာသည့်လမ်းကြောင်းသို့လည်းရောက်ရှိသွားသည်။
ဝါရှင်တန် - Mariner အထက်တန်းကျောင်း၌မျက်စိအလင်းရောင်
image ကိုအားဖြင့် yhiae ahmad ပါ မှ pixabay
၀ ါရှင်တန်ရှိ Everett ရှိ Mariner အထက်တန်းကျောင်းသည်အခြားနိုင်ငံရှိအခြားသောအထက်တန်းကျောင်းများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ကျောင်း၏အလင်းအချို့သည်အခြားမည်သည့်ကဲ့သို့မဆိုညတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျန်ရှိနေစဉ်၊ သန်းခေါင်ယံအချို့သောညများတွင်မီးများကမြေများကိုမှောင်မိုက်ထဲသို့ကျစေသည့်အခါတောက်ပနေလိမ့်မည်။
ဤသို့ဖြစ်လျှင်ဒေသခံအချို့ကကျောင်းအမှောင်ထုမှတောက်ပနေသောမျက်လုံးတစ်စုံကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် အကယ်၍ သင်သည်မျက်စိကိုရှည်လျားစွာစိုက်ကြည့်မည်ဆိုပါကကျောင်းအတွင်းရှိအတောင်ပံတစ်ကောင်၏ပုံကိုသင်စတင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
၎င်းသည်တရား ၀ င်မဟုတ်သောသဘာဝလွန် mascot လား။ Mothman ၏ညီငယ်သည်ညကျောင်းသို့တက်ပါသလား။ ဘယ်သူမှသေချာမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကခင်ဗျားသူတို့ကိုမမြင်ခင်ခင်ဗျားကိုကြည့်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ထို ဒီစာရင်းအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြင်နာမှုကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
အနောက်ဗာဂျီးနီးယား - မွန်ဂိုလီယာကောင်တီ၏ခေါင်းမဲ့ကျောင်းသားများ
ဒီမြို့ပြဒဏ္endာရီဟာ ၁၉၇၀၊ ဇန်နဝါရီလမှာကြေကွဲဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လူသတ်မှုအဖြစ်အပျက်ကနေဘဝကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နောက်တစ်ခုပါ။ တွဲဖက်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mared Malerik နဲ့ Karen Ferrell တို့ဟာဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းမှာရုပ်ရှင်တွေထွက်ခွာပြီးနောက်စီးနင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ လအနည်းငယ်အကြာတွင်သူတို့၏ခေါင်းပုံဖြတ်ထားသောအလောင်းများကိုသစ်တောများတွင်မတွေ့မချင်း၎င်းတို့ကိုထပ်မံတွေ့ဆုံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ဒေသခံများသည်အမှုအားဖြင့်မှန်ကန်စွာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့သည်။ ယူဂျင်းကလောဆင်အမည်ရှိသူတစ် ဦး သည်လူသတ်မှုကို ၀ န်ခံသည်အထိ ၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်တွင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒီမှာပါ။ Clawson သည်ဆိုးရွားလှသည့်လူတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူသည် ၁၄ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး အားမုဒိမ်းကျင့်မှုဖြင့်လည်းထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။ လူအများစုကသူသည်သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးငယ်နှစ် ဦး အားသတ်ဖြတ်မှုအတွက်အမှန်တကယ်အပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်ခဲ့ကြချေ။
Clawson အဖမ်းခံရပြီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရချိန် မှစ၍ ဤအမှုသည် podcasts များ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်စာအုပ်များဖြစ်သည်။ မည်သူမျှသူသည်ဤပြစ်မှုကိုကျူးလွန်သည်ဟုမထင်မြင်ပါ။
ဒါဘယ်သူလဲ? စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတိုင်းအတွက်မတူညီသောသံသယရှိသူရှိသည်၊ ၎င်းသည်ပြောရန်ခက်ခဲသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ခေါင်းမာသောအမျိုးသမီးနှစ် ဦး ၏အဖြစ်အပျက်များနှင့်ကောလာဟလများနောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရသောမာရက်နှင့်ကရင်တို့လမ်းဆုံတလျှောက်တွင်ကောလာဟလများနှင့်သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ တကယ်တော့ကားမတော်တဆမှုတစ်ခုထက်မကမော်တော်ကားသမားများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည့်ရုပ်ပုံများကိုအပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Wisconsin: The Ridgeway Ghost ခေါ် Ridgeway ၏ Phantom
image ကိုအားဖြင့် lea မျှော်လင့်ချက် bonzer မှ pixabay
Wisconsin ပြည်နယ်၊ Dodgeville အနီးရှိလမ်းတစ်လမ်းသည် ၁၈၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းရန်ပွဲကြောင့်သေဆုံးသွားသောညီအစ်ကိုနှစ် ဦး ၏ပေါင်းစပ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်ကတည်းကနှစ်ပေါင်း ၄၀ သံသရာဖြင့် Phantom ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ ဤမြို့ပြဒဏ္aboutာရီနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့်ကြောက်စရာကောင်းသောအရာသည် ၀ ိညာဉ်၏သွင်ပြင်ကိုပြောင်းလဲစေသောအရာဖြစ်သည်။ Ridgeway Ghost သည်ခွေးများနှင့်ဝက်များကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကြီးမားသောမီးလောင်ကျွမ်းမှုများကိုပင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အနည်းဆုံးအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာခေါင်းမရှိတဲ့မြင်းစီးသူရဲတောင်ပါသေးတယ်။
ဒေသခံအချို့က Phantom ၏မြင်ကွင်းကို pranksters ၏လက်ရာများဟုခေါ်ကြသည်။ သို့သော်ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသူများကသင့်အားမဟုတ်ပါ။
Wyoming: North Platte မြစ်ပေါ်ရှိသေမင်းသင်္ဘော
image ကိုအားဖြင့် အင်ဇယ်လ် မှ pixabay
ငါကများအတွက် sucker မိပါတယ် သင်္ဘောကောင်းကောင်း ပုံပြင် ...
၁၈၆၀ ခုနှစ်များ မှစ၍ Wyoming ရှိ North Platt မြစ်တလျှောက်ထူးဆန်းသော Phantom သင်္ဘောတစ်စင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအရာများမတည်ရှိသည့်အခါ - ထိုနေ့၏အလယ်အလယ်၌မြူထူထပ်သောဘဏ်တစ်ခုတွင်ပေါ်လာသည်။ နှင်းခဲဖုံးလွှမ်းနေသည့်၎င်း၏ကုန်းပတ်ပေါ်ရှိသရဲခြောက်သောသင်္ဘောသားတစ် ဦး နှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။
ဤသင်္ဘောနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာတစ်စုံတစ် ဦး မသေဆုံးမီကပင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့ကသင်အမှန်တကယ်သင်သင်္ဘော၏အခြားသင်္ဘောများကဲ့သို့နှင်းခဲဖုံးလွှမ်းသင်္ဘော၏ကုန်းပတ်ပေါ်တွင်အသေခံရန်ရည်ရွယ်ထားသူတစ် ဦး ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပြောကြသည်။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၁၀၀ ကျော်က Leon Webber အမည်ရှိထောင်ချောက်တစ်ခုသည်ရောင်စဉ်တန်းသင်္ဘောနှင့်သူ၏တွေ့ဆုံမှုကိုသတင်းပို့ခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာတော့သူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာအားလုံးဟာမြူခိုးကြီးတစ်ခုပဲ။ သူကအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်မြစ်ရဲ့အစွန်ဘက်ကိုအမြန်ပြေးပြီးလှည့်ပတ်နေသောကျောက်တုံးကိုပင်ပစ်လိုက်သည်။ ချက်ချင်းပဲရွက်လွှင့်သင်္ဘောပုံစံတစ်မျိုး၊ ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရွက်လွှင့်ခြင်းများကိုငွေရောင်နှင့်တောက်ပနေသောနှင်းခဲများဖုံးလွှမ်းထားသည်။
ဝက်ဘ်သည်သင်္ဘောသားအမြောက်အများကိုနှင်းခဲများဖုံးလွှမ်းနေသည့်မြင်နေရပြီးသင်္ဘောကုန်းပတ်ပေါ်ရှိလူအများစုဝေးနေသည်။ သူတို့ထွက်ခွာသွားသောအခါသူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရန်ကမ်းလှမ်းသောအခါသူကြည့်နေသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏အလောင်းသည်သူအလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်။ အနီးကပ်ကြည့်လိုက်ရင်ထောင်ချောက်ကသူမရဲ့စေ့စပ်ထားသူဖြစ်တယ်။ တစ်လအကြာအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါသူ၏ချစ်လှစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုမြင်တွေ့ရသည့်နေ့တွင်ပင်သူပြန်လာသည်ကိုသူမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ကောင်းပြီ ... ဒါပဲ။ ယူအက်စ်ရှိပြည်နယ် ၅၀ တစ်ခုစီမှကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးမြို့ပြပုံသဏ္coveredာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးရှိပါသလား။ သင်နှစ်သက်သောအခြားသူများရှိပါသလား။ သငျသညျကိုအောက်တွင်သင်ထင်သောအရာကိုသိပါစေ!